Cosmopolitan, yakajairwa C raibhurari ine muchinjikwa-chikuva chinotarisirwa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo yekutanga vhezheni ichangoburitswa yepurojekiti siyana iyo inomiririra kusimukira raibhurari yakajairwa C uye fomati yepasirese inogadziriswa iyo inogona kushandiswa kugovera zvirongwa zvehurongwa hwakasiyana hwekushanda.
Mudziyo yekuumbwa kwemafaira epasi rese anokwenenzverwa inoenderana nemubatanidzwa wezvimwe zvikamu uye misoro yeakasiyana masisitimu anoshanda (PE, ELF, MALE, OPENBSD) mune imwechete faira.
Kuvimbisa kuvhurwa faira rimwe rinogoneka paWindows uye Unix masisitimu, hunyengeri hune musimboti weiyo encoding yeWindows PE mafaera anoshandiswa muchimiro cheShell script, kutora mukana wekuti Thompson Shell haishandise iyo "#!" script marker.
Cosmopolitan inogadzira C mutauro unokwanisa kuvakwa kamwe uye unogona kumhanyisa chero kupi, kwakafanana neJava, kunze kwekunge iwo usingade kuiswa kwekutanga kwevaturikiri kana chaiwo michina. Cosmo inopa zvakafanana kutakurika mabhenefiti semitauro yepamusoro-soro seGo neRust, asi haigadzi mutauro mutsva uye haufanire kumisikidza CI system kuti igadzire mabhainari akapatsanurwa kune yega yega sisitimu inoshanda.
Zvinotariswa neCosmopolitan kugadzirisa C nekuibvarura kubva pamapuratifomu, saka zvinogona kuve zvakanaka kushandisa kunyora zvidiki zvirongwa zveUnix izvo zvinogoverwa zviri nyore kune vanhu vakawanda
Semagumo, faira rinoitwa rinogadzirwa umo mafomati akasiyana akasanganiswa inoshandiswa paUnix, Windows uye macOS. uye chinyorwa chemafomati akataurwa.
Iyo faira inotanga netaki "MZqFpD", iyo inodudzirwa semusoro muWindows PE fomati.
Semuenzaniso, pane Unix masisitimu, iyo kodhi yekodhi kumhanya ne exec command, kupfuura inoitisa kodhi kuburikidza nepombi isina zita.
Kunyange zvinotaurwa kuti pane muganho wenzira yakatsanangurwa iko kugona kumhanya pane Unix-senge inoshanda sisitimu uchishandisa chete makobvu anotsigira Thompson Shell inoenderana modhi, kana zvisina kudaro haizotanga zvakananga neiyo system yekufona.
Kudanwa qemu-x86_64 inoitirwa kupa kuwedzera kutakurika uye iyo inokutendera iwe kumhanyisa yakanyorwa x86_64 kodhi pane asiri-x86 mapuratifomu senge Raspberry Pi mabhodhi uye Apple zvishandiso zvine ARM processor.
Iyo purojekiti inogona zvakare kushandiswa kugadzira yakamira yega mashandisirwo iyo inoshanda isina anoshanda system (isina simbi). Mukushandisa kwakadai, mutoro unonamirwa kune iyo inoitisa faira uye chirongwa ichi chinoita senge bootable inoshanda sisitimu.
MuC libc yakajairwa raibhurari, yakagadzirwa neprojekti, ingangoita zana nemazana mana emabasa akaverengerwa ekugadzira komputa yekushandisa
Panyaya yekuita, siyana inoshanda nekukurumidza se glibc uye inonyanya mberi kweMusl neNewlib, nepo Cosmopolitan iri odhiyo yehukuru hwakakura mune saizi kodhi pane glibc uye inowirirana Musl neNewlib.
Kugadzirisa zvinowanzoidzwa kunzi mabasa senge memcpy uye strlen, maitiro ayo macro binding anoshandiswa kudaidza basa racho anowedzerwa kushandiswa, mune iyo compiler inoziviswa nezve CPU marejista ane chekuita nekuitwa kwekodhi, iyo inochengetedza zviwanikwa nekuchengetedza CPU mamiriro nekuchengetedza chete zvinoshandurwa marejista.
Kugadzira zvirongwa izvo zvinosanganisira akawanda mafaera (achibatanidza zvese zviwanikwa mune imwechete faira), kuumbwa kwefaira repasirese rinoitwa muchimiro cheZIP faira inotsigirwa yakanyatsogadzirwa (zvemukati zvinogona kutaridzwa ne "unzip -v" rairo, asi iyo faira inoramba iripo kuti itange kuburitswa).
Iyo faira inowanikwa nekubatika kusabatana neiyo yakarongwa libc uye nguva yekumhanya yakakodzera kumhanya pane chero kugoverwa kweLinux, macOS, Windows, FreeBSD uye OpenBSD. Iyo kodhi yeprojekti inogoverwa pasi peISC rezinesi (yakareruka vhezheni yeMIT / BSD).
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo nezve raibhurari iyi, unogona kutarisa izvo zvinyorwa, pamwe nezvinyorwa Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Cosmopolitan, yakajairwa C raibhurari ine muchinjikwa-chikuva chinogoneka